Ammaanka degmaad Wadajir oo markii ugu horeysay si aan horay loo arag loo sugayo – idalenews.com
Ammaanka degmaad Wadajir oo markii ugu horeysay si aan horay loo arag loo sugayo
Degmada Wadajir oo ka tirsan degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa waxaa ka bilowday howlgalladii ugu ballaarnaa oo in muddo ah degmadaasi laga fuliyo, howlgaladaasi oo ku saabsan adkeynta ammaanka degmada Wadajir ayaa waxaa laga dareemayaa isbedel xoog leh oo ku wajahan dhinaca nabadgelyada.
Maamulka Degmada Wadajir ah oo ololahaasi ka bilaabay degmadiisa ayaa howlgeliyay ciidamada madaniga ah, kuwaasi oo ilaa iyo iminka ku guuleystay inay xasiliyaan nabadgelyada degmada oo maalmihii ugu dambeeyay u muuqatay mid aan la isku halleyn karin bacdamaa horay ay uga dhaceen falal lagu dilay Weriyeyaal ka badan ilaa shan Weriye.
Howlgalada lagu sugayo nabadgelyada ee ka bilowday degmada Wadajir ah ayaa si is daba joog ah habeen iyo maalin waxay uga socdaan xaafadaha kala duwan ee ka tirsan degmada Wadajir, iyadoo muddo 24-saac gudahood howlgaladii ugu dambeeyay lagu soo qabtay dhallinyaro ka tirsan ururka Al-Shabaab oo iyagu degmadaasi ka waday howlgallo qarsoodi ah.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada oo saacad kaddib isbedelaya la dhigay isgoysyada iyo waddooyinka waaweyn ee ku yaala degmada Wadajir, iyadoo isu socodka dadka, gaadiidka iyo ganacsigaba uu yahay mid aanu wax saameyn ah ku yeelan howlgalada lagu adkeynayo nabadgelyada.
Dhinaca kale xilliyada habeenkii ayaa waxaad ku arkeysaa waddooyinka iyo isgoysyada ciidamo fara badan, kuwaasi oo iyagu kontrol joogto ah ku haya gaadiidka iyo dadka degan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Wadajir, iyadoo in ku dhow toban ruux la dhigay xabsiga kaddib markii looga shakiyay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab, inkasta oo dad horay loogu qabqabtay markii baaritaano lagu sameeyay qaarkood la sii daayay kaddib markii lagu waayay wax dembi ah.
Tartanka ugu yaabka badanaa caalamka (Daawo Muqaalkaan)
Ciidamada Aammaanka iyo Kuwa Amisom oo Maanta magaalada Kismaayo ku Fashiliyay Fal is Qarxin ah oo lala Damacsanaa xarunta Jaamacadda